Madheshvani : The voice of Madhesh - राजपा कुनै हालतमा फुट्दैन, अध्यादेशबाट नेकपालाई नै खतरा : महासचिव झा (अन्तर्वार्ता)
राजीव झा, महासचिव, राजपा नेपाल
० सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई तपाइँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तालिप्साका कारण सरकारले अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी यो अध्यादेश राजपा वा समाजवादी पार्टीका लागि होइन । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पद जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुभएको हो । नेकपा बन्नुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा ओलीजी र प्रचण्डजीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ओलीजीको कार्यकाल अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहिरहनुभएको छैन । उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यतिकै बिग्रिएको हो । स्थायी समितिमा उहाँको बहुमत छैन, प्रचण्डजीको बहुमत छ । पार्टीभित्र ओलीजी अल्पमतमा पर्दै जानुभएको छ र त्यसले पद जान्छ कि भन्ने डरले यस्तो अध्यादेश आएको हो । ओलीजीले पार्टी फुटाएर भएपनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ । यो कदमले लोकतन्त्र र संघीयतालाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरिएको हो । सयौं मधेशीको शहादत पश्चात् प्राप्त भएको संघीयतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसका कारण अहिले पूरा विश्व आक्रान्त भएको अवस्था छ । पूरै विश्व अहिले अज्ञात शत्रुसँग लडिरहेको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा आफ्नो पद जोगाउनका लागि विभिन्न प्रकारका जालझेल गर्ने षड्यन्त्रकारीहरुका कारण यो देश पछाडि परिरहेको छ । चीनका कारण जसरी कोरोना भाइरस विश्वभरि नै फैलियो, त्यो कारणले चीनबाट एक हजारभन्दा कम्पनीहरु बाहिरिन खोजिरहेको छन् । जसमध्ये तीन सय कम्पनी भारत जानका लागि तयार भइसकेको छ । अहिले अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्री वा सरकारले चीनबाट बाहिरिने कम्पनीहरुलाई नेपाल ल्याउने पहल गर्नुपर्ने थियो । हाम्रो सरकारले ती कम्पनीहरुलाई नेपालमा स्थापना गर्नका लागि यदि आह्वान गर्यो भने धेरै कम्पनीहरु नेपाल आउन सक्छन् । नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ, तर सरकारको यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले यदि आह्वान गर्यो भने धेरै कम्पनीहरु नेपाल आउन सक्छ र नेपाल समृद्धिको बाटोमा आफै जान्छ ।
० सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबाट मधेशकेन्द्रितहरु फुट्ने आँकलन पनि गरिँदैछ नि ?
— राजपा फुट्छ भन्ने कसैले सोच्नु दिवास्वप्न जस्तै हो । फुट्नका लागि ६ वटा राजनीतिक दल मिलेर राजपा बनेको होइन । राजपा मधेशी जनता मात्रै होइन, यो देशमै शोषित, पीडित, उत्पीडित, उपेक्षित समुदाय वर्गको आत्मसम्मान रक्षाका लागि निर्माण भएको पार्टी हो । राजपा कुनै पनि हालतमा फुट्दैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट राजपा वा समाजवादीलाई हानी हुँदैन, बरु नेकपा नै फुट्ने कगारमा पुगिसकेको छ ।
० तर, राजपाका कतिपय नेताहरुमा सत्तालिप्ता देखिएको छ नि ?
— पार्टीमा फरक मत, फरक विचार वा गुट हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । हरेक पार्टीहरुमा विभिन्न गुट उपगुटहरु छन्, राजपामा मात्रै होइन । अन्य दलहरुमा नेतापिच्छे गुटहरु सक्रिय छन् । राजपा सरकारमा जाने कुरा पनि भएको होला । तर, राजपा नेपाल मधेशी, आदिवासी जनजाति, शोषित, पीडित जनताको अधिकारसहितको संविधान संशोधन जबसम्म हुँदैन तबसम्म सरकारमा जाँदैन । त्यहीं अडानमा राजपा नेपाल अढाई वर्षदेखि अडिग छ र अहिले पनि हाम्रो अन्तिम अडान त्यहीं नै हो ।
० यो अध्यादेशले राजपालाई कुनै असर गर्दैन ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पहिचान, अधिकार र समावेशीताको लागि संघर्ष गर्ने पार्टी भएको र आफ्नो माग मुद्दाप्रति दृढ संकल्पित रहेकोले यसखाले निर्णयले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने जानकारी गराउदछौं।अहिलेको निर्णयले गर्दा कुनै प्रकारको भ्रममा नपरी कोरोना महामारीको यश घडीमा पुरै पार्टी पंक्तिलाई एकढिका भै लकडाउनको नियम पाल्ना गर्दै आफू सुरक्षित रहि आआफ्नो ठाउँमा दत्तचित्त भै आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न आह्वान समेत गर्दछौं । आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटका विपरीत पुरै मुलुकलाई अस्थिर बनाई राजनीति प्रती वितृष्णा जगाउने गरि राजनीतिक दल विभाजन गर्न,भएको ऐन संशोधन गरि ल्याइएको अध्यादेश जनभावना बिपरित स्थिरता ,स्थायित्व र आर्थिक समृधिको आफ्नै मान्यता विरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट भएको छ । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतालाई भुमिकाहीन बनाउने गरि ल्याइएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र देखिएको छ । राज्यको हरेक ठाउँमा आफुखुशी निर्णय र नियुक्तिहरु गरि मुलुकलाई एकात्मकता,निरंकुशता र अधिनायकवाद तर्फ लाने मनसाय उदागिंएको छ।विधिको शासन र जनभावना विरुद्ध संविधानको मर्म विपरीत सर्वसत्तावाद लाद्ने कुचेष्टा छताछुल्ल भएको छ ।